Sivanina araka: Noforonina amin'ny Added By
Low-mikoriana e no napetraky The National Energy Policy Act. Low-mikoriana e afaka manome ny homeowner amin'ny tahiry lehibe, ary ho maharitra fepetra ao amin'ny fanavaozana na fanorenana. Low mikoriana e toy ny kabine, faucet aerators, ary ny ranonorana-doha, dia afaka manome ny ilàna izany raha oharina amin'ny tsy ambany-mikoriana e.
Low mikoriana fixture mpanamboatra mitovy eo amin'ny teknolojia ampiasaina, Fa izy ireo dia afaka manome ny vokatra ihany, ary ny rafitra vaovao ireo dia mandroso mba ho ampiasaina amin'ny fizotran'ny ambany e.
Low Flow fandroana Loha
Low mikoriana fandroana loha ireo amin'ny nandeha taham-latsaky ny 2.5 GPM amin'ny rano tsindry avy 80 kilao isaky ny santimetatra toradroa (PSI). Na izany aza, vao haingana mikoriana iva fandroana loha mihitsy aza dia afaka manome nandeha taham-latsaky ny 2.0 GPM. Roa fototra ambany karazana mikoriana fandroana loha:
Laminar-mikoriana - Laminar-mikoriana fandroana lohany dia hamorona renirano ny rano sy hanome miaraka amin'ny fanaraha-maso ny mari-pana marina kokoa.
Aerating - Io karazana fandroana mikoriana ambany lohany dia afangaro ny rano amin'ny rivotra namorona ny zavona karazana rano dipoavatra. Izany dia miteraka be dia be ny etona sy ny hamandoana, ary amin'ny toetr'andro mando tsy soso-kevitra.
Low mikoriana fandroana loham zokiolona dia tokony hisolo izay natao tamin'ny nandeha taham-5.5 GPM.
Low Flow kabine
Low mikoriana kabine sy Ultra-kabine ambany mikoriana no natao mba hampiasa ny antsasaky ny habetsahan'ny rano ny nentim-paharazana kabine. Low mikoriana kabine ireo salan'isa 1.6 GPF, fa tsy 3.5 GPF.
Ny famolavolana ny ambany-kabine no mikoriana eo afo noho ny filazana fa misy modely tsy afaka kabone ny fidiovana amin'ny fomba mahomby. Tatỳ aoriana fampisehoana teknika sy ny kabine no upgraded ho fanampiana ireo zava-manahirana, ka dia natao, ny maro an'isa, amin'ny maoderina sasany ny safidy ho an'ny ranon-javatra sy feno fako maoderina ho an'ny fanariana fako mafy.
Maro ambany mikoriana kabine koa natao mba hampihenana ny olana clog, satria ny andalan-teny dia midadasika kokoa drainage.
Hery misintona-Fed Low Flow kabine - Io karazana ambany fizotran'ny mampiasa trano fidiovana ny nentim-paharazana lanjan'ny rano mba hanosika azy nidina fitoeran-diloilo. Mora kokoa izy ireo, ary tsy dia mitabataba fa nanampy ambany tsindry-mikoriana kabine.
Tsindry-kabine Flow amin'ny fanampian'ny Low - Io karazana mikoriana ambany trano fidiovana matetika afaka mampihena ny noisier fa fanjifana ny rano avy 45% raha oharina amin'ny maha-sakafo kabine. Mampiasa ity tontolo ity tsindry rivotra miorina mafy ao anatin'ny tanky mba hanosika ny rano teo.
Ahoana ny Faucets?
Old hilatsaka faucets Azo mandany be dia be ny rano sy ny vola. Tokony hihevitra ny faucets fanoloana raha mampiasa mihoatra noho 2.5GPM. Misy hevitra roa izay afaka misafidy avy ny hanoloana izany faucer lany andro. Azonao atao ny misafidy na ny manolo izany amin'ny vaovao faucet, raha ny tokony amin'ny latsaky ny 1.5GPM na amin'ny alalan'ny fametrahana ny aerator. Ny aerator na mikoriana restrictir dia afaka hanampy ho efa misy faucet, fanomezana ho mora sy mora vidy fanovana izay hamonjy anao vola nandritra ny taona maro.
Soa azo avy amin'ny fampiasana Cost Low Flow e
Low-mikoriana e afaka tokoa mitaky vola sasany upfront fanampiny haka raha oharina amin'ny nentim-paharazana e.
Na dia izany aza, satria trano maro kaody mitaky ny manana ambany mikoriana e, efa nandinika tena vidiny no izany karazana e, no mahay manampy ny fanorenana volavolan-kevitra. Arakaraka ny mpanamboatra, ny trano fidiovana fototra no lany eo amin'ny $ 75 sy $ 450, afa-tsy ny fixture. A ambany mikoriana kabine Mora lany eo amin'ny $ 100 bebe kokoa arakaraka ny mpanamboatra, fa ny payback mpanjifa fa mety ho haingana tahaka ny telo taona noho ny tahiry eo amin'ny fampiasana ny rano.
Low-Flow soa e
Tsara noho ny Retrofitting
Low-kabine mikoriana afaka mamonjy mihoatra noho 20,000 litatra isan-taona ny rano mandritry ny efa-mpikambana family
Misy amin'ny malalaka nahay ny loko sy ny fomba.
Nifehy ny Fikambanan'ny Plumbing Iraisam-pirenena sy ny manam-pahefana Mechanical (IAPMO)
Dia tsy maintsy hihaona ny mety American National Institute Standards (ANSI)
-Water mahomby afa-kabine vola amin'ny volavolan-dalàna isam-bolana ny rano.
Ankehitriny rano faucets Lasa fitaovana bebe kokoa, ary ny asa ny fametrahana na Fanamboarana faucets ireo dia lasa sarotra kokoa. Ny dingana hametraka ny faucet dia somary ny dingana toy izany, fa amin'izao fotoana izao ny teknolojia mitondra singa samihafa izay tokony ho fantany.
Rehefa izany dia efa mifandray, olana sasany mety hisy vokany eo amin'ny fanatanterahana ny faucet, toy ny tete azo, feo maranitra sy ny olana hafa.
Andeha isika hita ny sasany olana iraisana sy ny fomba hamahana azy ireo.
Raha ny mahazatra, ny rano ambany ny tsindry avy amin'ny faucet dia vokatry ny sprayer diverter. Ny diverter miditra tsimoramora dia tapa-damba kely hita ao anatin'ny faucet vatana. Ny diverter mifehy ny rano nankany an-faucet, ka tsy maintsy jereo fa madio, dia mety ho kely tsentsin'ny korontan-trano rava sy ny mineraly. Raha ny diverter tsy lalan-, mety mila hisolo ny diverter.
Faritra iray hafa mba ho meloka amin'ny tsindry ambany rano dia ny aerator. Ny aerator tahaka ny diverter dia azo diovina amin'ny borosy sy ny fanadiovana vahaolana. Azonao atao koa ny miezaka mampiasa vinaingitra mba hanala fitaovana sy unclog azy.
Farany, ho azo antoka ny olana dia tsy ny rano avy tsindry avy any amin'ny jiro sy hijerena fa ny rano valves rehetra dia mivadika ho an-dalana.
Price Misting from Faucet
Raha ny rano sprays zavona azy amin'ny tena mikoriana rehefa mampiasa ny faucet, dia mety ho tianao ny mijery fa ny aerator dia screwed tamin'ny mafy.
Mampiasa lamba na borosy mba hanesorana mineraly, kasety na potipoti-javatra avy amin'ny aerator, araka ny mety ho lalan-. Aza adino ihany koa ny hijery ny aerator milina fanasan-damba.
Reinstall ny aerator sy hanamarina indray. Raha toa ny olana mbola mampiseho ny dia mila hisolo ny aerator araka ny mety ho vaky na simba.
Faucet tahony tete azo
Rehefa mahita fa ny rano faucet tete azo, andramo hanenjanany ny fonosana-bazana teo amin'ny tahony, dia afaka ny ho toy izany ny tena mahatonga ny ny mandefa.
Indraindray ny simba peratra O-tokony hosoloana.
Hisolo ny O-peratra, hanidy ny rano fisotro eny andalana, disassemble ny faucet ary manolo ny cartridge raha ilaina, arakaraka ny olana fa miatrika ianao. Rehefa fanoloana ny o-vava vola, manadio ny ao anatiny ny spout sy ny ivelan'ny vatana ny miditra tsimoramora. Isika ihany koa ny fahazoan-dalana mankany lubricating spout o-vava vola aminy, amin'ny silicone-monina menaka.
Drips avy amin'ny Spout
Iray hafa olana drips iombonana amin'ny faucet spout. Raha toa ianao mametraka ny famatrarana fomba faucet, dia mila hisolo ny seza milina fanasan-damba sy / na manolo ny miditra tsimoramora fanaovam-panavotana.
Fa hafa rehetra faucets rano ianao, dia mila ihany no miditra tsimoramora hisolo ny fanaovam-panavotana.
Rehefa fikodiadian-manenjika anareo Aho vonoy faucet ny rano, dia mety ho ny rano kanonta. Mety ho voavaha amin'ny alalan'ny fametrahana ny rivotra efi-trano.
Raha toa ianao ka efa nametraka rivotra efi-trano, vonoy ny rano, tatatra ny rano tsipika sy hiverina ny rano indray. Rehefa mitranga ny feo ny rano rehefa faucet efa niova ho eo, ny miditra tsimoramora mba mila milina fanasan-damba vaovao, na ny rano avy ao amin'ny famatsian fanerena tsipika dia ambony loatra na ambany loatra na.
Faucet tahony no sarotra ny miasa
Raha ny mahazatra dia ho sarotra ny miasa tahony mety hitranga satria antsanga na potipoti-javatra efa nanimba ny cartridge.
Potipoti-javatra, ary ny mineraly vy mety hanimba ny tombo-kase ao anatin'ny cartridge.
Azonao atao koa ny mila hisolo ny cartridge na fikojakojana azy amin'ny silicone-monina menaka. Aza mampiasa ny kilasy plumber faucet menaka, silisiôma sprays na lubricant mety misy solika. Petroleum-monina rehefa menaka dia mety amin'ny fingotra tombo-kase, ary mety hahatonga ny tahony izany ho tonga sarotra kokoa ny miasa.
Maro karazana ny fantson-drano ho an'ny toeram-ponenana na fantsona trano ara-barotra. Fantson-drano fantsona toy ny PEX, Copper sy PVC dia ampiasaina ara-dalàna miankina amin'ny ny fampiharana sy ny toerana izay efa napetraka. Koa misy karazana sodina fantson-drano hafa toy ny mainty poakaty, ny tafo sy ny varahina. Andeha hojerentsika eto ambany ny tsara indrindra fangatahana ny tena fahita fantsona nampiasaina fantson-drano.
Stainless vy sodina. Photo Hans Pixabay
Stainless vy dia afaka mijery tena milamina fa dia tena expensive.Stainless sodina vy no ampiasaina any amin'ny faritra sy ny foto-kevitra ny harafesiny akaikin'ny faritra amoron-tsiraka. Io karazana sodina tsy ampy amin'ny na hentitra loatra sy henjana ary mila sakamandimby manokana mba ho tia hafa karazana fantsona. Aza afangaro Stainless vy fantsona amin'ny tafo fantsona. Misy amin'ny habe samihafa sy ny halavan'ny.
PEX TAPAKA FANTSONA
PEX fantson-drano be. Photo Makdesignbuild.com
Pex TAPAKA FANTSONA dia malefaka plastika TAPAKA FANTSONA izay lasa malaza eo amin'ny trano fonenana sy ny fifantenana fandraharahana madinika fampiharana. Na dia kely ambony vidiny voalohany, kely dia kely ny fikarakarana sy ny fametrahana haingana dingana mahatonga ny tsara indrindra ho an'ny rano sodina fizarana ao anatin'ny trano iray. PEX TAPAKA FANTSONA manome ny tena mandefa-maimaim-poana ny vokatra fanatitra tombony ny varahina TAPAKA FANTSONA. Ny iray amin'ireo lafiny ratsy manan-danja indrindra dia ny hoe tsy azo ampiasaina amin'ny fampiharana ivelan'ny trano, satria mety hanimba taratra UV dia ivelan'ny trano plastika sosona.Bebe kokoa
Copper TAPAKA FANTSONA Nampiasaina in Plumbing
Clean varahina rehefa efa tapaka. Photo Cedarcityrecycling.com
Fantsona varahina dia angamba ny fantson-drano nentim-paharazana indrindra sodina nampiasaina be dia be noho ny faharetan'ny sy azo itokisana. Manome ambony harafesiny fanoherana, fitaovana lehibe ho ampiasaina amin'ny mafana sy mangatsiaka rano izany, ary azo nahavita mora foana. Na izany aza, ny tena zava-dehibe ny handinihana alohan'ny fampiasana varahina dia TAPAKA FANTSONA fa mila soldered miaraka ary mety mitaky fanampiny Fittings. Tsy ny rehetra no mahay soldering fantsona varahina, fa ny lahatsoratra Ahoana no Solder Copper Pipes mety hanampy anao.
PVC TAPAKA FANTSONA
PVC sodina. Photo publicworksgroup Flickr
Fantson-drano ireo fantsona PVC ampiasaina amin'ny hatsiaka sy ny mafana ny rano madio sy maloto miaraka amin'ny fampiharana. Fantsona PVC mitovy eo amin'ny hateviny sy ny fanahafana arakaraka ny fampiharana Izay ho ampiasaina. Ohatra, ny tsindry fantson-drano, dia tsy mitovy amin'ny sewer fantsona, fa tsy mitovy toy ny tafio-drivotra ireo ampiasaina amin'ny rafitra drainage. Fantson-drano plastika vokatra natao ho an'ny rano madio rindrambaiko dia matetika antsoina miaraka na "NSF-PW" na "NSF-61" mba hampisehoana fa ny vokatra mifanaraka amin'ny fepetra takiana ara-pahasalamana vokatry ny NSF / ANSI Standard 6.
Nandrisika Plumbing Pipes
Nandrisika sodina. Photo Home Depot
Nandrisika TAPAKA FANTSONA nampiasaina taona maro lasa izay toy ny faneva ho fonenana tetikasa. Na izany aza, ny fotoana dia tsy dia matetika no ampiasaina, satria dia afaka hanangana harafesina ao anaty fantsona kely savaivony. Raha ny sodina dia ampy taona, dia afaka mahita ny rano avy amin'ny faucet amin'ny harafesina soritra toy ny kongonina mahafoana mahamenatra avy ao anatiny ny sodina. Fantsona nandrisika Azo ampiasaina hitaterana fotsy rano na tsy madio ny rano.
Pipes varahina nampiasaina tamin'ny Plumbing
Fantson-drano varahina. Photo EugenesDIYDen Pixabay
Fantson-drano varahina lehibe fantsona manome harafesina mpanohitra TAPAKA FANTSONA, raha ny natao tamin'ny 67% ny 85% varahina. Ny tsara indrindra sodina kilasy varahina dia azo rehefa misy ny firaka 85% varahina, ary antsoina hoe varahina mena sodina. TAPAKA FANTSONA varahina dia manome ny ela be izay zavatra tsy harafesina ao anatiny, ary tsy miteraka fatiantoka friction ao amin'ny sodina. Fantson-drano varahina fantsona dia mora kokoa ny kofehy noho ny fantsona vy sy ny tsara ho an'ny mafana-rano sy ny rafitra fizarana lehibe, toy ny paompy Fittings, rano fiara mifono vy, sy lavaka famorian-drano. Varahina sodina tokony mazàna no haharitra ela kokoa noho ny hafa fitaovana fantson-drano. Varahina sodina ankapobeny tonga amin'ny 12-tongotra halavan'ny mahitsy.
Alatsaho Iron TAPAKA FANTSONA
Alatsaho vy sodina. Photo McWane, Inc.
Fantson-drano vy nanipy fantsona dia raha ny tokony ho vokarina toy ny lakolosy-ary-spigot karazana. Mety ho hita koa amin'ny threaded tonon-taolana, fa lafo kokoa noho ny lakolosy sy ny spigot iray. Ireo fantsona dia mavesatra noho ny hafa fantsona, raha ny tokony ho ampiasaina ho an'ny rafitra fitsinjarana rano, na ambanin'ny tany toy ny fametrahana fantsona lehibe eo amin'ny drainage na sewer rafitra. Ny habe kely indrindra izay tokony hoe manufactures dia 4 "sodina, lehibe ampy ho ampiasaina amin'ny fampiharana fonenana. Alatsaho vy sodina dia mavesatra ary tsy maintsy tohanana ianao raha mbola hivory ny mpiray.
Kabine ireo fitaovana tena manan-danja ampiasaina foana ary iray amin'ireo tena tapa-ninia tsy nijery ny efitra fandroana. Ny olona dia hifantoka bebe kokoa amin'ny kovetabe fandroana na ny zava-poana, fa tsy hifantoka amin'ny trano fidiovana. Maro ny karazam-kabine, toy ny nentim-paharazana, ambaratonga ambany, niverina tany manda, rindrina nihantona, sy ny maro hafa. Kanefa izany dia tena zava-dehibe ny mahafantatra fa tsy ny kabine no fitsipika kabine. Koa tandremo tsara mba hahitana ny kabone mividy mpitarika.
Trano fidiovana Buying Guide
Zavatra tsy nividy kabine mpitari-dalana, dia hanampy anao eo anatrehanao hividy ny manaraka kabine. Koa aza hadinoina ny:
Manapa-kevitra ianao raha mampiasa ny iray na roa miray tapa trano fidiovana
Ny trano fidiovana voafidy dia hifanaraka amin'ny fitsipika ao an-toerana
Safidio ny karazana fametrahana
Refeso ny toerana izay misy ny fidiovana dia nametraka
Raha azo atao, miezaha mba hividy ny fidiovana avy amin'ny marika anarana
Manapa-kevitra eo amin'ny boribory na kabine elongated vilia baolina
trano fidiovana Features
Ankoatra ny mividy mpitari-dalana, zava-dehibe ihany koa ny mandinika ireo trano fidiovana endri-javatra
Rano Saving- kabine sasany mety manana heviny rano taratasy fanamarinana, avo-fahombiazana hanondrahana kabine amin'ny 1.28 na latsaka litatra isaky ny maoderina, raha ampitahaina amin'ny 1.6 litatra ny mahazatra kabine.
Dual Flush- Tianao ve ny mifidy ny fidiovana izay afaka manome anao ny fahafahana manana ampahany maoderina ho an'ny ranon-javatra na maoderina ho an'ny mafy feno fako?
Trano fidiovana Bowl Height- Fampiononana kabine dia heverina ho toy ny tsy nentim-paharazana kabine. Ny faneva lovia sisiny no misy ny 15 santimetatra ambonin'ny tany, fa kabine lovia amin'ny 17 santimetatra dia raisina ny tsara indrindra ireo. A 17 mirefy ary na dia iray santimetatra 19 lovia haavon'ny trano fidiovana ihany koa amin'ny fanarahana ny Amerikanina manana fahasembanana Act.
Vilia baolina shape- An elongated vilia baolina, na dia mitana toerana bebe kokoa, manome toerana bebe kokoa sy mamela seza vitsy ankasitrahana ho afa-mandositra. Raiso fiheverana izany ho toy ny vilia baolina elongated mety ho niakatra ho any 6 "intsony noho ny fitsipika vilia baolina.
Toilet- roa miray tapa kabine no mora kokoa noho ny fa miray karakarainy voangony vovoka eo anelanelan'ny tanky sy ny fitoeran-diloilo. Ampahany iray-kabine no lafo vidy kokoa ary mety ho sarotra ny hametraka noho ny roa-tapa kabine. Raha ny fampisehoana izy ireo efa ho toy izany koa.
Kabone Systems- fingotra flappers dia zavatra momba ny lasa. Jereo ny vaovao maoderina tilikambo izay azo itokisana kokoa noho ny taloha flappers. Tsindry-kabine hanampy kokoa ny rano-flushers mahomby noho ny hery misintona kabine.
Valve- manaraka izay manana kabine, fara fahakeliny, ny 3 mirefy maoderina miditra tsimoramora. Nentim-paharazana manana kabine 2 santimetatra miditra tsimoramora, Izay namonjy tsy naroson'ilay noho ny vaovao.
Marokoroko-in Dimensions- Distance from niverina ho eo amin'ny rano manda tsipika fidirana Miovaova arakaraka ny modely ho modely, dia mangataka eo anatrehanao mahazo ny vaovao kabine.
Noise- Noise mety ho toe-javatra, rehefa mandeha ny trano fidiovana ho nametraka akaikin'ny faritra avo fitaterana.
Color- Mihoatra ny 80 isan-jato manaraka fotsy nentim-paharazana, na dia bebe kokoa ny olona no miezaka isan'andro loko hafakely vaovao.
Water Lines- Ampiasao Stainless vy rano malefaka andalana fa tsy henjana na Chrome-nandrandrana tsipika varahina.
Mangina-Off Valve- Misy karazana fifandraisana maro ho voarindrina-eny miditra tsimoramora. Solder fifandraisana sy ny famatrarana fifandraisana no be mpampiasa indrindra, fa ho azo antoka fa tsy manana fantsona vy taloha araka izay mety mitaky karazana fifandraisana hafa.
trano fidiovana Manufacturers
Ireo no ambony kabine mpanamboatra fa afaka mahita ao amin'ny US. Izany rehetra aloha miankina amin'ny anton-javatra sy ny vola be ny mpanjifa dia vonona ny hahafoy zavatra.
Toto-Toto dia iray amin'ireo lehibe 3 ny trano fidiovana mpanamboatra
Kohler- Köhler manome vokatra tsara indrindra amin'ny vidiny antonony.
Malagasy-bidy madio, trano fidiovana ny Malagasy dia mendrika mpifaninana.
Lamba famaohana Ring sy ny hafa Bathroom Accessories Installation Heights
Bathroom Accessories dia raha ny tokony ho iray amin'ireo zavatra farany ho nametraka rehefa Remodeling na mandritra ny dingana fanorenana. Na izany aza, raha tsy fantatrao ny fomba sy ny toerana mba hametraka efitra fandroana Accessories, dia afaka mihazakazaka ho lehibe kokoa ny olana rehefa mety ho atsofony ny taila mahatonga fahavoazana amin'ny tsy ilaina ary atsofony. Ireto misy soso-kevitra avo izay azonao ampiasaina rehefa Accessories fametrahana efitra fandroana.
Tsarovy foana ny avo roa heny hijery amin'ny fanorenana eo an-toerana sy Ada kaody tari-dalana.
Maro amin'ireo soso-kevitra avo dia nalaina avy amin'ny iraisam-pirenena Residential Code (IRC), fepetra ny Amerikanina manana fahasembanana Act sy navoakan'ny ny National Kitchen & Bath Association.
Standard Mirror Installation Haavo
Fitaratra azo nametraka amin'ny avo hafa arakaraka ny karazana fitaratra ho nametraka. Amin'ny maha-ankapobeny tondrozotra, dia azo nametraka eo 38 sy 42 santimetatra. Izany dia mifandray fandrefesana ka hatrany ambany hahavon'ny ny fitaratra, refesina avy tany amin'ny farany. Ny tolo-kevitra dia ny fitaratra dia nitaingina amin'ny ambany lelan-taratry tsy misy ambonin'ny avo noho 40 santimetatra ambonin'ny tany farany. Indraindray dia te-mampifantoka ny fitaratra amin'ny manda sy ny zava-poana ho an'ny hatsarana tanjona. Misy soso-kevitra ny hametraka ny iray manontolo isaky ny lavany fitaratra washroom rehefa fandroana ho ampiasain'ny vahoaka.
Fametrahana Haavo for Bathroom talantalana
Talantalana dia napetraka amin'ny haavony samy hafa arakaraka ny fampiasana sy ny karazana talantalana ho nametraka. Raha ny mahazatra dia azo nametraka teo anelanelan'ny tongony sy 3 4 tongony koa, tahaka ny mirrors.However, izany dia mitovy arakaraka ny karazana efitra fandroana ary misy ny fironana vaovao mba hanana niches fa tsy talantalana.
Bathroom Accessories fametrahana: Savony lovia / Savony mpizara
Ny savony dia tsy maintsy nametraka lovia Tamin'ny taona tokotokony haavon'ny 44 santimetatra na avo toy ny 54 santimetatra. Ny haavon'ny toerana lovia savony dia ho hita avy amin'ny fandroana dipoavatra. Raha ny savony mpizara dia tsy maintsy hapetraka amin'ny kely indrindra 40 santimetatra sy toy ny avo tahaka ny 48 santimetatra. Ny tena tsara ny savony dia nametraka lovia amin'ny 48 santimetatra; Na izany aza, raha misy savony mpizara, ny tsindry hanoto dia tokony ho hita 44 "ambony indrindra mihoatra noho ny FF.
Lamba famaohana Ring Installation Haavo
Ny lamba famaohana peratra dia tsy maintsy nametraka teo anelanelan'ny 50 santimetatra sy 52 santimetatra ny haavony, refesina avy tany amin'ny farany. Raha toa ianao ka mirefy ho afaka amin'ny zava-poana ary no dia nahantona 20-22 santimetatra mihoatra noho izany. Amin'ny ankapobeny, ny tena kely indrindra dia 36 avo "ho an'ny towels, 18" Sasao lamba ho refesina avy amin'ny zava-poana countertop.
Ny haavon'ny lamba famaohana fametrahana rail dia miovaova arakaraka ny karazana sy ny fampiasana ny efitra fandroana. Ny rail dia tsy ho nametraka miaraka amin'izay koa ny efitra fandroana avo, rehefa ho ampiasain'ny ankizy. Ny lamba famaohana rail dia nametraka 48 santimetatra ambonin'ny tany. Te-hijery ny toerana ihany koa ny mamoaka herinaratra sy ny haingon-trano ny asa kapila tanimanga. Rehefa maro fametrahana lamba famaohana lalamby, mandrefy ny anankiray izay ho ambony indrindra, ary avy eo dia aforeto lamba famaohana tamin'izany ambaratonga.
Mark 2 santimetatra ambanin'ny faritra misy ny ambany sy ny lamba famaohana izay tokony ho ny toerana mba hametraka ny faharoa lalamby.
Taratasy fidiovana Roll Holder Haavo?
Ny taratasy fidiovana mpihazona ny horonan-taratasy azo nametraka eo 19 sy 26 santimetatra avy amin'ny tany. Ny Amerikana manana fahasembanana Act Mampirisika mampiasa 19 santimetatra raha ny National Kitchen & Bath Association fahazoan-dalana hiditra 26 santimetatra toy ny tonga lafatra avo. Raha toa ka tsy manana be dia be ny toerana ianao, dia mety ho tianao ny handinika mifandray azy io hatramin'ny ilany ny zava-poana.
Bathroom Accessories fametrahana: Cabinet
Bathroom cabinets dia tokony napetraka amin'ny 54 santimetatra vita etsy ambony rihana. Izany dia satria matetika dia manana zava-poana 36 santimetatra fitsipika miampy 18 santimetatra ny toerana mazava ao anelanelan'ny. Indraindray ny fitambaran'ny ny fitaratra / governemanta no voafidy ka tandremo tsara ny no nametraka azy io amin'ny an-tampon'ny 12 santimetatra ny countertop.
Bathroom Accessories fametrahana: haka ponja
Grab trano fisotroana dia tokony hapetraka, fara fahakeliny, 33 "-36" ambonin'ny tany. Raha ny fametrahana dia amin'ny lafiny rindrina haka fisotroana dia ho kely indrindra 42 santimetatra ny lavany, miorina 12 santimetatra ambony indrindra avy amin'ny rindrina aoriana sy manitatra 54 santimetatra avy ny wall.There aoriana dia fampahalalana fanampiny momba ny fomba hametraka haka barany, araka izay natolotry ny Amerikana manana fahasembanana Act ao amin'ny lahatsoratra momba ny haka barany.
Fametrahana Haavo solon'ny tanana Dryers
Hand dryers manana bebe kokoa toro lalana voafaritra tsara, araka izay tokony ho afaka miasa mora foana ho mampihatra afa-tsy kely indrindra force.These vondrona dia Ada hihaona manokana amin'ny lafiny fanajana ny tena dia afaka protrude ary tokony ho avy amin'ny loko mifanohitra. Ny hanoto ny bokotra dia tokony hapetraka amin'ny 38 santimetatra ambony FF amin'ny mazava, fara fahakeliny, ny rihana toerana ny 30 "48 X" eo anoloan'ny them.When mihoatra ny iray dia nametraka tanana fanamainana, ny faharoa dia azo nametraka rafitra eo 42 "-48" ambony rihana vita.
Armati hampianatra anao ny fomba mba Refinish anaty kovetabe fandroana
Update ny efitra fandroana amin'ny alalan'ny mamelombelona ny loko eo amin'ny koveta be fandroana.
Aoka Nature in Amin'ny Outdoor fandroana
Ranonorana ivelan'ny trano dia tsy ho an'ny poolside sy ny torapasika-bahoaka intsony. Fifadian-kanina izy ireo zareo lasa mamelombelona ny andavanandro ankoatra ny efitra fandroana an-trano.
Armati hampianatra anareo ny Anatomy ny kovetabe fandroana sy ny Ahoana ny fametrahana ny Replacement
Mianara momba ny koveta be fandroana rehetra anisan'izany ny hanesorana sy hanolo iray.
Armati hampianatra anao ny fomba ny fametrahana ny Anti-Scald Valve
Ajanony tampoka ny rano fandroana fanovana mari-pana amin'ny alalan'ny fametrahana ny anti-scald miditra tsimoramora ao amin'ny fandroana.
Armati hampianatra anao ny fomba hametraka ny Corner fandroana
Zavatra tsy voalamina tsara nefa stylish fandroana fitaovana afaka manafaka ny toerana malalaka kely fandroana.